Ingaba umntwana uneminyaka engama-7 ekhaya? Abazali abaninzi banenkxalabo malunga nale ngxaki. Ngaphezu koko, kungekhona kuphela kubo, kodwa nabanye abantu abanomdla kwabanye abantwana ngenxa yemisebenzi yabo kwintsimi yokukhulisa nokufundisa.
Kukho iimpendulo ezinokwenzeka. Inguqu yethu iyona eqhelekileyo. Sikholelwa ukuba eli lixesha elihle. Akusiyo into yokuba emva kweminyaka eyisixhenxe isikolo siqala. Umntu ngaleli xesha lobomi bakhe sele sele enezakhono ezininzi kunye nobuchule, abasebenzisa ngokucacileyo. Nangona kunjalo, awukwazi ukushiya umntwana ngaphandle. Kubalulekile ukulungiselela lo mntwana kunye nabazali ngokwabo. Uya kufunda indlela yokwenza oku ngokufanelekileyo kwinqaku lethu.
Masiqale ngokubhengezwa kwengxaki - oku kubaluleke kakhulu kwisigqibo sokugqibela. Namhlanje, abazali abanako ukuhlala bekwazi ukunikela ixesha labo kumntwana. Ngokuqhelekileyo kukho imeko apho umntwana kufuneka ahlale khona yedwa kwindlu. Omnye ngaphambili, umntu kamva, kodwa lo mbuzo ubhekane nawo bonke abazali. Kukho izizathu ezininzi zezi. Ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukuya kwindawo ethile (ukutyelela, kwisitoreji, ukusebenza), kodwa akukho mntu ukushiya umntwana wakho: bonke abasondeleyo baxakekile, kwaye akukho xesha lokujonga umntu "kwicala". Kule meko, uqala ukuvumisa nokuphonsa abazali: ngaba umntu unokushiya okanye kusasa? Kukholelwa ukuba ukufikelela kwiminyaka engama-7 ubudala akufuneki ukushiya umntwana wedwa. Ubuncinane ubuncinane bokuqala ukufundela unyana okanye intombi ukuba ahlale ingu-4-5 iminyaka. Nangona kunjalo, kusasa kakhulu. Umntwana akanakho ukuqonda umyalezo wakho kwaye uloyike. Khawucinge nje ukuba kufuneka kube nzima kangakanani ukubona umntwana ukuba yedwa kwindlu? Unokuxhalabisa imibuzo embi, njengaye: kuthekani ukuba abazali ababuyi? Kuthekani ukuba kwenzeka okuthile? Zonke izandi ezingaqhelekanga zingakhokelela ekuthukeni. Kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba lo mbandela ufanele ulungiswe ngokwawo. Mhlawumbi umntwana wakho uvela kubantu abancinci nabazimeleyo! Ubuchule bokulwa noloyiko oluqokelelwa yiminyaka esixhenxe lukhulu. Kubalulekile ukuqwalasela umlingiswa ngamnye womntu omncinci. Ukuba umntwana usoloko ekhala kwaye esaba, ngoko-ke ukwesaba kwakhe kufuneka alwe ngeendlela zokushiya indlu yedwa. Ngaphandle koko, ingxaki ingadluka.
Ndiza kuthetha okungakumbi: ukwesaba komntwana akusoloko kunokwenzeka ukuhlangabezana ngaphandle koncedo lweengcali. Ukuba kukho, ungesabi ukucela abantu abanolwazi ngoncedo. Ukuba umntwana wakho ukhululekileyo, ke kukho iindlela zokumfundisa ukuba ahlale yedwa.
Okokuqala, ukungabikho kwakho kufuneka kube mfutshane (ungaqala ngemizuzu eyi-10, ukwanda kancane). Ngexesha elifanayo umntwana kufuneka abe nezakhono ezithile ukwenzela ukuba ahlale yedwa ephephile.
Umntwana kufuneka afunde ukuba umnyango awukwazi ukuvulwa nakubani na, nokuba ummelwane okanye ipolisa. Inombolo yefowuni yomakhulu, umsebenzi wam umama, abamelwane bam kufuneka babhalwe ngokukhulu kwaye balele kwindawo ebonakalayo.
Kwakhona kuyimfuneko ukulungiselela iimeko ezizinzileyo nezikhuselekileyo zomntwana. Kubalulekile ukunciphisa iingxaki ezinokuthi zivale - vala i-valve yegesi, ukhiye i-balconi, njl. Ukuba kukho umnxeba, kungcono ukuwukhupha, kwaye ukuba oko kungenakwenziwa, mfundisa umntwana ukuba athathe ifowuni kwaye ngokukhawuleza ayifake ukuba icacise ukuba umntu usele ndlu. Umntwana kufuneka ngokuqinisekileyo eze nomsebenzi. Ngokomzekelo, ba ndakanya iikhathuni kwiTV. Kwaye, ngenxa yoko, wena, emva kokubuya ekhaya, uya kufumana zombini wakhe kunye nendlu ehambelana kwaye iphephile.
Ngokuphathelele ukutya, uya kuvuma, kunzima ukucinga ukuba umntwana omnye ekhaya uya kuthatha isiphumo ngokufanelekileyo, ngoko ungazithembi. I-yogurt yekhefu engcono, ishizi, isanti, i-pie, i-juices, ii-cookies, njl. - ngaphandle koko, umntwana uya kujabulisa ukudlula ubutyebi.
Ngokuqinisekileyo, umntwana makangacetyiswa malunga neengozi ezinokwenzeka, kodwa ungagqithisi, kuba akayikhumbula yonke into. Khumbula ukuba ukhuseleko alukho isizathu sokuxoxa. Imeko nganye kufuneka ibe ne-algorithm ecacileyo, apho umntwana kufuneka azi ukuba akwenze ntoni.
Kule meko akayi kuba nexhala, ukuba unesimo esingavamile, kwaye kuya kuba lula kuwe: uya kuqiniseka ukuba akukho nto embi eya kwenzeka kumntwana ngoxa yedwa. ixesha.
Zizo ezo zakhono eziya kuba luncedo kuye ebomini. Kwaye, njengokuba kuneminyaka emininzi ubudala, nakwiiminyaka zesikolo. Ngubani owaziyo ukucwangcisa ixesha lakhe, umntwana uya kukwazi ukwenza kakuhle esikolweni, ekhaya nakwiindawo. Mhlawumbi, ukuhamba kwexesha elide lomntwana ekhaya kuphela eliya kumkhokelela ekhatyweni elimangalisayo, kuba kulo mbandela, ukuzimela nokugxininisa kubalulekile. Enyanisweni, kukuthi uthathe isigqibo sokuba uyishiye yedwa okanye cha, kukho imfuno enjalo okanye inokukhutshwa.
Indlela yokukhulisa i-eyelashes ngokuchanekileyo
Ukutshutshiswa kwamadoda, kutheni amadoda atshintsha?
Emva kokugxeka uBuzvaya Dmitry Nagiyev ulungiselela umdlalo wevidiyo, ividiyo